Maraibhurari edhijitari atinogona kubvunza mahara | Zvazvino Zvinyorwa
Carmen Guillen | | Literature, Dhijitari nyika
Muchinyorwa chino nhasi tinopa zvimwe maraibhurari ayo akadhinda zvemukati zvemadhijitari kutipa ruzivo rwemahara zvachose uye 100% kurodha zviri pamutemo uye kubvunza. Kana iwe uchida kuziva izvo zvavari, nyatsoteerera kune zvinotevera. Ivo vari erubatsiro rukuru kune vese vaverengi nevanyori.
1 Maraibhurari edhijitari
1.1 Raibhurari yepasi rose yedhijitari
1.2 Gutemberg chirongwa
1.3 Miguel de Cervantes Virtual Raibhurari
1.4 Virtual Raibhurari yeBibliographic Heritage
1.5 Raibhurari Yenyika yeSpain
1.6 Cyber ​​raibhurari
Raibhurari yepasi rose yedhijitari
Iri ndiro Raibhurari yeUnited States Congress uye Unesco. Inozivikanwa se WDL uye mairi unogona kuwana yakakura nhoroondo uye tsika ruzivo (Asia, American, European, nezvimwewo) zvachose mahara uye mumitauro yakasiyana.
Yakanyanya kukurudzirwa kune avo vanotsvaga nhoroondo dhata yekumisikidza zvinyorwa zvavo.
Unganidzo yaunoda iwe wega dandemutande zvinoratidza, zvakagadzirwa nezviuru zvevazvipiri. Mariri tinogona kuwana anopfuura makumi maviri emadhijitari mabhuku, uye anopfuura zviuru zana kana tikabatana nemawebhusaiti akabatana uye atinogona kuwana pane webhusaiti yavo
Zvakare kurodha pasi zviri pamutemo, mahara zvachose uyezve mune hombe nhamba yemafomati akasiyana eedu eBook uye zvigadzirwa zvemagetsi. Asi kana iwe uchida kubatsira, unogona kusiya chipo chako che1 euro. Hazvina kudhura kana isu tichifunga nezve huru yezvinyorwa izvo isu tine yemahara kuwana, handiti?
Miguel de Cervantes Virtual Raibhurari
Kana iwe uchida kutsvaga zvekuziva chokwadi nezvenhoroondo, tsvaga nhetembo, dzidza nezve hupenyu hwevakuru maartist uye zvese zvine chekuita nemabhuku, kunyanya Spanish neLatin American, ino webhusaiti yako. A dandemutande kunyatso chenjera uye kujekesa izvo zvinotipa izvi zvese, zvakare, zvachose mahara kuti tinakirwe.
Virtual Raibhurari yeBibliographic Heritage
Icho chirongwa chakazvarwa muSpanish Ministry of Dzidzo, Tsika uye Nhabvu, iyo inotipa isu ese marudzi eunganidzwa ezvinyorwa uye mabhuku akadhindwa ari chikamu cheSpanish Historical Heritage. Izvo zvakanaka nekuti pano tinogona kuwana dhata iyo, nekuda kwehunhu hwayo, inogona kunetsa uye kuomesa kutsvaga.
Kana iwe uchida kuramba uchitarisa, shanyira pano.
Raibhurari Yenyika yeSpain
Zvimwe dandemutande mairi isu tinobvumidzwa kubvunza, kurodha pasi kana kuverenga nhamba hombe yemagwaro, mafaera, mifananidzo, mifananidzo, mepu, zvinyorwa, nezvimwewo, mahara kune chero mushandisi.
Uye zvakare, ivo vanogara vachikuzivisa iwe nezve masevhisi uye zvetsika zviitiko iwe zvaunogona kuwana munzvimbo dzakasiyana dzenyika yedu. Zvese zvine vhudzi nezviratidzo, zvichiratidza mazuva nemaawa. Webhusaiti yakazara kwazvo.
«Cyber ​​library» yakanga iri chirongwa chakatangwa neBancaja Foundation. Mariri, isu tine mukana wekusununguka zvachose kune anopfuura makumi mashanu nemakumi mashanu ezvinyorwa, zvesainzi uye zvehunyanzvi zvinyorwa, pamusoro pekugona kushanyira mazana emaraibhurari akabatana uye nekukwanisa kuwana nekukurumidza kuburikidza nepuratifomu iyi. Neichi chikonzero, «Ciberoteca» inozivikanwa se «Raibhurari yeraibhurari».
Chinhu chekujekesa uye chimwe chinhu chandinofarira zvakanyanya ndechekuti machiri tinogona kuona kuti ndeupi munyori anosarudzwa se "munyori wemwedzi". Nenzira iyi isu tinogara tichidzidza uye nguva dzose tichitsvaga ruzivo rwezvose, sevanyori ivavo vasingazivikanwe zvachose kwatiri uye avo zvakadaro vakagadzira mabasa anoshamisa.
Iwe unofungei nezve aya maraibhurari edhijitari? Izvo zvinofadza kufamba muraibhurari pakati pezviuru nezviuru zvemabhuku. Cherekedza ivo, sarudza imwe, itore, itarise, ibate ... Asi zvakare zvakangofanana kana kutonyanya kushamisa, kuve nekukwanisa kuwana huwandu hweruzivo urwu nekungobaya-baya, handiti iwe funga? Hatina kumbobvira tawana mukana wekuwana ruzivo rwakawanda sezvazvino… Ngatitore mukana wacho!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Dhijitari nyika » Maraibhurari edhijitari atinogona kubvunza mahara
Zvinyorwa zvemazuva akaipa